Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zeDown Syndrome eFlorida ngo-2022
Oktobha 23, 2021 Eze uThadayo
Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zeSifo seDown eFlorida
I-Down syndrome icela umngeni kumntwana nakubazali, masikuncede ufumane ezona zikolo zihle kakhulu eFlorida ukunciphisa amanye amaxhala akho.
Ukufumana isikolo esifanelekileyo sabantwana abaneemfuno ezizodwa kunokuba ngumngeni kwaye liphupha lakhe wonke umzali ukufumana umntwana wakhe kwisikolo esimfanelayo. Kwaye nokuba iimfuno ezikhethekileyo okanye akunjalo, lo ngumsebenzi onzima kuye wonke umzali ophaya. Ngeli nqaku, sinethemba lokusombulula loo mba okanye, ngandlela-thile, sinciphise umsebenzi wakho.
Injongo yesi sithuba sebhlog kukunceda abazali, abagcini babantwana, kunye nootitshala bafumane isikolo esifanelekileyo sabantwana babo, iwadi, okanye umfundi onengxaki ngokwasemzimbeni okanye ngokwasengqondweni. Abantu abanjalo bakhethekile yaye akufuneki baphoswe kulo naluphi na uhlobo lwesikolo. Bakhethekileyo, ke ngoko, kufuneka babe sesikolweni sezidingo ezizodwa ukuze baphathwe ngokufanelekileyo.
Ootitshala kwesi sikolo baqeqeshwe ngokungqongqo ngendlela yokufundisa ngempumelelo, ukuqeqesha, kunye nokukhathalela aba bantwana bakhethekileyo. Esi sesinye sezizathu ezibangela ukuba bangavele babhalise kwisikolo esiqhelekileyo. Iikharityhulam kunye nesimbo sabo sokufundisa zahlukile kwaye kunjalo nokusingqongileyo.
Imeko-bume yolu hlobo lwezikolo iyilelwe ngokukodwa ukuvuselela ubuchule bokuyila, ukufunda, nokuzonwabisa kwaba bantwana bakhethekileyo. Ikwayilelwe ukuba bazive bekhululekile kwihlabathi labo kwaye bafunde ngesantya sabo ngaphandle koxinzelelo oluvela kootitshala kunye/okanye abanye abafundi.
1 Yintoni Down Syndrome?
2 Ungasijoyina njani iSikolo seDown Syndrome eFlorida
3 Izikolo zeDown Syndrome eFlorida
3.1 1. Isikolo saseNorth Florida seMfundo eYodwa (NFSSE)
3.2 2. Isikolo seArbor saseCentral Florida
3.3 3. Livingstone Academy
3.4 4. I-Divine Academy ye-Broward Special Needs School
3.5 5. IZiko leMfundo
3.6 6. IAltantis Academy Amanxweme ePalm
3.7 7. IZiko lezoMhlaba weSithembiso
3.8 8. Alpine Academy
3.9 9. Fikelela kwiAkhademi
3.10 10. ISikolo sethu esiNgcwele
Yintoni Down Syndrome?
I-Down syndrome yimeko yofuzo apho umntu anechromosome eyongezelelweyo (ichromosome 21) ebangela iingxaki ezingephi ukuya kwezinzima zomzimba kunye nophuhliso. I-syndrome ibonakala isesona sizathu sixhaphakileyo sokukhubazeka ngokwasengqondweni, esenza malunga ne-15 - 20% yabantu abakhubazeke ngokwasengqondweni.
Alukho unyango kubantu abaphila ne-down syndrome.
Ungasijoyina njani iSikolo seDown Syndrome eFlorida
Akukho mfuneko ikhethekileyo ekujoyineni nasiphi na isikolo se-down syndrome eFlorida. Kufuneka nje uchonge isikolo ofuna ukubhalisa umntwana wakho esikolweni, kodwa umntwana wakho kufuneka angene kudidi lweemfuno ezizodwa azibonelelayo.
Ngexesha lenkqubo yesicelo sokubhalisa umntwana wakho, unokucelwa sisikolo ukuba unikeze ingxelo yakhe yezempilo kunye neerekhodi zakhe zemfundo kwisikolo awayefunda kuso ukuba uye wafunda. Abazali baya kuphinda bacelwe ukuba batyelele isikolo kwaye leyo yindlela yokujoyina isikolo esisezantsi eFlorida.
Izikolo zeDown Syndrome eFlorida
Izikolo ze-Down syndrome eFlorida ezidweliswe apha zizikolo ezizinikeleyo ezinezidingo ezizodwa ezixhasa i-down syndrome. Ezinye zizikolo eziqhelekileyo ezibonelela ngenkxaso ye-down syndrome. Okudweliswe kwaye kuxoxwe ngakumbi ngezantsi zizikolo eziphantsi kwe-syndrome eFlorida. Uluhlu olubanzi lwazo luye lwaqulunqwa ukuze ube neenketho ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
1. Isikolo saseNorth Florida seMfundo eYodwa (NFSSE)
Isikolo saseNorth Florida seMfundo eYodwa, ekwabizwa ngokuba yi-NFSSE, sesinye sezikolo eziphantsi kwe-syndrome eFlorida. Ibekwe eJacksonville. I-NFSSE ikwiphulo lokufumanisa nokukhuthaza izakhono ezizodwa zomfundi ngamnye ezibonisa amandla abo aphezulu kuluntu olubandakanyekayo.
Isikolo asikho nje kubantwana abane-down syndrome kodwa nakubani na phakathi kweminyaka eyi-6-22 kunye nokwahlukana kwengqondo kunye nophuhliso. Injongo yesikolo kukulungiselela abafundi ukujoyina abasebenzi kwaye babonise ukuzimela kangangoko banako. Ukufundiswa kunye namathuba oncedo lwemali nawo ayafumaneka ukuxhasa abafundi.
2. Isikolo seArbor saseCentral Florida
Isikolo seArbor saseCentral Florida sesinye sezona zikolo zibalaseleyo eFlorida. Isikolo sisebenzisa ikharityhulam esekelwe kuluvo kunye nendlela yokufunda esekelwe kunyango ukuhlangabezana neemfuno zemfundo zabantwana, kungekhona nje nge-syndrome ephantsi, kodwa kunye ne-dyslexia, i-autism esebenzayo, i-SLD, kunye nezinye iziphene zophuhliso.
Isikolo sikwanazo nezatifikethi eziqinisekisiweyo, iingcali zonyango ezisebenza ngesandla kunye nootitshala kwaye zisebenzise unyango lomsebenzi, intetho, kunye nonyango lolwimi, kunye nonyango lomculo, kunye nobugcisa bokukhupha eyona nto ingcono emntwaneni wakho kwaye uqinisekise ukuba yonke imiba yeemfuno zomntwana. ziyahlangatyezwa. Isikolo seArbor saseCentral Florida sibambisene neminye imibutho ebonelela ngemali yokufunda kunye noncedo lwemali kunye nenkxaso-mali yokufunda kubafundi.
3. Livingstone Academy
I-Livingstone Academy yenye yezikolo ezingenzi nzuzo, zabucala ze-syndrome eFlorida ezineendawo ezine eBrandon, eRiverview, eSeffner, naseValrico ngokulandelelanayo. Yasekwa ngo-2003 kwaye yasekwa ukuze ikhonze iimfuno zemfundo zabantwana abane-autism, SLD, Asperger's, ADHD, kunye ne-down syndrome.
Iziko ngalinye lezemfundo libhalisa abafundi bebanga loku-1 ukuya kwele-12. Esi sikolo sibambisene neMcKay, Gardiner, kunye neFTC Scholarship ukubonelela ngenkxaso-mali kubazali abangakwaziyo ukuhlawula iifizi.
4. I-Divine Academy ye-Broward Special Needs School
I-Divine Academy sisikolo sabucala esineemfuno ezizodwa esiseHollywood, eFlorida. Esi sikolo sasekwa ngo-2005 kwaye siyaqhubeka nokubonelela ngezakhono zentlalo kunye nobomi obude eziya kuziseka ubomi babo bonke. 4 kuphelath ukuya 12th amabakala amkelwe kwaye unyango lwangaphakathi kwaye ukhathalelo lwaphambi nasemva kwesikolo lukwabonelelwa.
Kukho iinkqubo ezintathu ezahlukeneyo; isikolo esiphakathi, isikolo samabanga aphakamileyo, kunye neprogram yabantu abadala. Inkqubo yesikolo esiphakathi yeyabantwana abaphakathi kweminyaka eyi-11 ukuya kwe-14 ngelixa inkqubo yesikolo esiphakamileyo yenzelwe abantwana kunye nabaselula abaphakathi kweminyaka eyi-15 ukuya kwe-22.
Kwaye okokugqibela, inkqubo yabantu abadala yinkqubo yabantu abadala abancinci ukuba baxhase kwaye babonelele ngezibonelelo kunye namathuba abanokuwadinga ukubanceda ekutshintsheni kuzo zonke iinkalo zobomi babo ngoqeqesho lokuhlala ngokuzimeleyo.
5. IZiko leMfundo
IZiko leAkhademi sisikolo sabucala esasekwa ngo-1968 sabafundi abakhubazekileyo ekufundeni, i-down syndrome, i-dyslexia, kunye nabanye. Esi sikolo, ke ngoko, sesinye sezikolo eziphantsi kwe-syndrome eFlorida.
Isebenzisa ikharityhulam yekholeji yokulungiselela abafundi abakumabanga 4-12 eyilelwe ukukhuthaza ukuzithemba, ukuzithemba, kunye nokuzithemba kunye nokukhuthaza abafundi ukuba banikele okusemandleni abo kuyo nayiphi na imisebenzi abayenzayo.
Ukubhalisa umntwana wakho esikolweni, kufuneka nje ufowunele umlawuli wesikolo emva koko umisele intlanganiso yokutyelela isikolo kunye nomntwana wakho ukuze ukhenkethe isikolo. Iintlobo ngeentlobo zee-scholarship zikwakhona ukuze abafundi bafake izicelo.
IAtlantis Academy sesinye sezikolo eziphantsi kwesifo eFlorida esekwe ngo-1976. Umlinganiselo apha womfundi notitshala uphantsi ukuze abazali, abafundisi-ntsapho, nabafundi bakwazi ukwenza ubuhlobo obunokuba yingenelo kubo bonke abantwana ababhaliswe apha.
Ikwaqhayisa indawo yokuphumla, kunye namava, inkathalo, kunye nabasebenzi abongisayo ukunceda abafundi ukuba bakhulise ukuzithemba kunye nokuzithemba kwabo kunye nezakhono zabo zentlalo. Kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zokufunda ukufundisa abafundi abohlukeneyo njengoko wonke umntu eneendlela ezahlukeneyo zokufunda. Ezi zicwangciso zihambelana nenqanaba lemfundo kunye nesantya sokufunda somfundi ngamnye.
Ukuphucula amava esikolo abafundi, banokubandakanyeka kwiiklabhu zasemva kwesikolo, ukufundisa, kunye neenkqubo zasehlotyeni.
7. IZiko lezoMhlaba weSithembiso
I-Promised Land Academy sesinye sezikolo eziphantsi kwe-Down syndrome eFlorida ezibonelela ngemfundo kubafundi abanengxaki yokufunda ukusuka kwisikolo sabantwana abancinci ukuya kwi-12.th ibakala. Sisikolo sosuku lonke, sobuKrestu kwaye sisikolo esifanelekileyo kubazali abangathanda ukubhalisa umntwana wabo kwiziko lenkolo. Inika indawo ekhuselekileyo nenothando apho abafundi bakhokelwa kwaye baqeqeshwa ngootishala abaziingcali ukuba bafunde ngesantya sabo.
Icala likwanalo neqela leengcaphephe kunye neengcali zokuthetha ezinelayisenisi kunye neengcali zonyango ezisebenza ngokusondeleyo nootitshala. Kwaye bobabini bajongana neenjongo zomzimba, zentlalo, zomoya, kunye nezengqondo zomntwana ngamnye.
8. Alpine Academy
I-academy sesinye sezikolo eziphantsi kwe-syndrome eFlorida kwaye ikwajongana nezinye izakhono zokufunda ezizodwa ezifana ne-ADHD, i-autism, kunye neemfuno zokuziphatha nezeemvakalelo ebantwaneni. Ithembisa ngemeko-bume yokufunda eyonwabisayo nekhuthazayo kwakunye nabafundisi-ntsapho abaqeqeshwe kakhulu nabahlalutyi bokuziphatha ukuze bacele umngeni, bakhuthaze baze bafundise abafundi.
Iinkqubo ezilapha ziyilelwe ukuphucula izakhono zemfundo ezifana nokufunda, izibalo, unxibelelwano, intlalontle, ukuzinyamekela, ukuzilawula, kunye nezakhono zokubhala ukuze abafundi baphile ubomi obunempumelelo nobunemveliso.
9. Fikelela kwiAkhademi
Ukufikelela kwiAkhademi sisikolo sabucala, esingenzi ngeniso esiyilelwe ukunceda abafundi abakumabanga e-K-12 abanokukhubazeka okukodwa kwezemfundo nezentlalo ezifana ne-down syndrome, i-autism, i-dyslexia, i-ADHD, kunye neminye imingeni yokufunda kunye nophuhliso. Ukunceda abafundi ukuba bafikelele kwisakhono sabo esipheleleyo, iziko lemfundo lidibanisa iindlela ezahlukeneyo zokufundisa, itekhnoloji, kunye nezicwangciso ezintsha.
Esi sikolo singena phakathi kwezikolo ezisezantsi ze-syndrome eFlorida kwaye kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukubhalisa umntwana wakho.
10. ISikolo sethu esiNgcwele
IAkhademi yethu Engcwele sisikolo sabucala esilungiselelwe abantwana abavela kwi-K-12 abaneemfuno ezizodwa, ukukhubazeka ekufundeni, kunye nemingeni yophuhliso. Iinkqubo ezibonelelwa kwesi sikolo zizifundo ezahlukeneyo ezivumela abafundi ukuba bazibandakanye kubugcisa obubonwayo nobenziwayo, inkqubo yolwimi-mbini lwesiSpanish, uqeqesho lwezakhono zobomi, ulwimi lwezandla, kunye nemfundo yomzimba ukukhulisa izakhono zabo zemfundo nezentlalo.
I-Sacred Academy yethu ikwangena phakathi kwezikolo eziphantsi kwe-syndrome eFlorida. Abantwana abane-Down syndrome banokubhaliswa kwesi sikolo ukuze bathathe inxaxheba kwiinkqubo zabo ezintsha kwaye baphuhlise amandla abo ngokupheleleyo.
Ezi zezona zikolo zili-10 zibalaseleyo eFlorida, kubalulekile ukuba abazali nabantwana bakhe bakhenkethe nasiphi na isikolo abanomdla kuzo ukuze baqinisekise ukuba ziyamfanela umntwana wabo kwaye baya kunceda ngokufanelekileyo iimfuno zabo. Ngeli nqaku lifikelela esiphelweni, ngethemba, siye sanceda ekususeni umsebenzi wokukhangela isikolo esifanelekileyo somntwana wakho ezandleni zakho.
Kwakhona, jonga i-scholarship kunye namathuba oncedo lwezemali ngelixa ufaka isicelo sokwamkelwa.
Ngaba zikhona izikolo ezikhethekileyo ze-down syndrome?
Ewe, kukho izikolo ezikhethekileyo ze-down syndrome. EzaseFlorida kuxoxiwe ngazo kweli nqaku.
I-8 Ehlers iDanlos Syndrome Scholarships
Ubungcali obuphezulu be-15 bokugula okungapheliyo kwaBafundi
Post Previous:I-13 yeZikolo eziBalaseleyo ze-Ivy League zePre Med
Okulandelayo Post:I-15 iiyunivesithi zamaKristu eziphezulu eMelika